Muzvare Thokozani Khupe naVaDouglas Mwonzora
Vachitaura nevatori venhau muHarare neChipiri, VaPhugeni vati komiti yavo yepamusoro yeNational Council yakaita musangano nezuro ikabvumirana kusendeka parutivi zvakabuda musarudzo dzemusi weSvondo pakasarudzwa VaDouglas Mwonzora kuti vatore chinzvimbo chemutungamiri webato zvichitevera kufa kwakaita VaMorgan Tsvangirai.
VaPhugeni vati komiti yavo yakatsoropodza kubirirwa kwavanoti kwakaitwa sarudzo naVaMwonzora pamwe nekurohwa mbama kunonzi kwakaitwa vanga vakafanobata chigaro chemutungamiri webato kongiresi iyi isati yaitwa, Muzvare Thokozani Khupe, nemumwe wevechidiki vaive pakongiresi iyi uyo asati asungwa.
VaPhugeni, avo vati musangano uyu wakaitwa pamasasai VaMwonzora vasipo, wakapindwa nevanhu vashomanana sezvo vachiti musangano uyu wakashevedzerwa zvechimbichimbi naMuzvare Khupe.
Asi VaMwonzora vati zviri kutaurwa naVaPhugeni hazvina musoro sezvo vachiti musangano weNational Council yebato hausati waitwa.
VaMwonzora vati zvakabuda musarudzo hapana chichachinja uye vave kutogadzira kuti bato ravo rofamba sei zvichienda mberi.
Vatiwo vakakunda zviri pachena, uye vave kutotarisira kuti kongiresi isiri yechimbichimbi iitwe mushure memwedzi mitanhatu kuitira kuti vagowana nguva yekugadzirira sarudzo dzemuna 2023.
VaPhugeni vati pari zvino vasvitsa nyaya yekusafambiswa zvakanaka kwavanoti kwakaitwa sarudzo dzekongiresi iyi kumagweta avo kuti vaone matanho ekutora.
Kongiresi yechimbichimbi iyi yakaitwa neSvondo zvichitevera mutongo wedare reSupreme Court uyo wakati VaNelson Chamisa havana kusarudzwa zviri pachena kuti vatungamire bato reMDC.
Dare iri rakati kusarudzwa kwakanga kwaitwa Muzvare Khupe pakongiresi yavakaita kwainge kusiri pamutemo, rikati bato iri ridzokere paranga riri muna 2014 izvo zvakapa kuti Muzvare Khupe vafanobata matomu kudzamara kongiresi yekutsvaga achatsiva VaTsvangirai yaitwa.
Asi VaChamisa avo vave kutungamira MDC Alliance vanoti vakatoita kongiresi yavo kare kuGweru gore rapera mutongo uyu usati wabuditswa.